kaominina | GAZETY_ADALADALA
Fa ahoana ihany e…?
Posted on 23/01/2010 by gazetyavylavitra
Mba niara-nandeha an-tongotra nombam-bady aman-janaka aho androany hariva. Nialana kely ny fitaingenana kodiaran-droa. Ilaina rahateo ny mampiasa vatana.
Tanjona ny mba hanome toerana ho an’ny fianakaviana, fa dia efa tototry ny asa sy ny fanarahana ity raharaham-pirenena ity loatra ny saina amam-potoana mandritry ny herinandro. Tsy avelan’ny zava-panao tsy hitoditodika anefa.
Zavatra telo no voamariko teny an-dalana rehetra teny.
Voalohany, ny mpivarotra ‘anaty arabe’ (fa tsy amoron-dàlana intsony). Nisy ny fanapahan-kevitra noraisin’ny mpitantana ny tanàna (RAKOTONDRAVAHY Edgar) tamin’ny hanesorana azy ireny teny amoron-dàlana ka nametrahana azy ireo tamin’ny toerana voatondro mazava (Namontana, Petite Vitesse, Behoririka…). Naàto nandritra ny andro vitsivitsy ny fakàna hàban-tsena noho ilay fandaminana natao, ary nolazaina avy eo fa miverina nanomboka tamin’ity herinandro ity. Anisan’ireo hitakiana haban-tseana ary ve ireto mpivarotra anaty arabe ireto? Tsy fantatro ny valiny. Fa raha ny zavatra hita aloha dia mitombina foana ny fitsarana nataon’ny rehetra tany aloha tany hoe ‘sadasada manan-tsoratra ilay fandaminana’. Ny teto amin’ny GazetyAdaladala moa dia efa nametraka fa hampikorontana ity fandaminana noraisina ity. Indrindra fa toa lalaovina sy tsy atao araka ny tokony ho izy ny fampiharana ny lalàna sy ireo teny nomena momba izany. Androany fotsiny izao dia nandrenesana feo ny mpivarotra iray etsy anatin’ny araben’i Behoririka (ilay midina avy any amin’ny magazay lehibe IRRESISTIBLE – ex-GAULOISE- Soarano iny) fa hoe ‘manao risoriso sy mifidy tavan’olona ireo mpiasan’ny Kaominina manao ny asa fandaminana eny an-toerana. Misy hoy izy ny mpivarotra ilazàna mba handositra, ary misy ireo tonga dia raofina ny entany. Miverina indray ny fangalam-pierin’ny mpivarotra ‘amoron-dàlana sy anaty làlana’ miaraka amin’ireo mpiasan’ny Fivondronana sy ny fiara manga-beny, tonga hatrany amin’ny faritry ny tetezana sy ny mizotra ho any Andravoahangy iny izany tranga izany. Fa ahoana ihany e? Mifanatrika eo ireo mpivarotra nalàna ka natsofoka ao am-bàla, sy ireo mibodo ny làlam-bahoaka ho toeram-pitadiavam-bola. Dia mandram-pahoviana no handraisan’ny mpitantana ny tanàna (CUA) andraikitra hentitra sy matotra e? Sa mbola andran’asa no natao tamin’iny fotoana iny?
Faharoa, manomboka eo anoloan’ny Lisea RABEARIVELO manitsy mankany afovoan’Analakely sy ny mivily hivoaka aty amin’ny NAZA Electronic. Tsy misy hafa amin’izay miseho etsy Behoririka ny zavatra hita eny amin’io faritra io. Tsy misy firaharahàna ny mpandeha an-tongotra sy ny mpampiasa làlana izany mihitsy, fa hatrany anaty fiolahan-dàlana aza dia ametrahana entam-barotra, na rehefa tsy ny entana, dia ny mpivarotra no mametraka ny sezany ao anaty làlana fa ny entana kosa eo ambony ‘trottoir’. Fa ahoana ihany e? Ampiharina ve ity fanadiovana an’Antananarivo sy ny arabeny ity sa inona no andrasana sy antenaina ao ambadik’izao rehetra izao e? Mahagaga an! Mahatalanjona.
Fahatelo, dia ny fanakànan’ny Pôlisy’ ny fiara mpitatitra hitanay teny Behoririka nanoloana ny tranoben’ny Fifankatiavana Sinoa-Malagasy. Roa ireo mpitandro filaminana nanakana ny zotra 144 teo amin’io toerana io. Tsy hainay izay antony aloha satria efa nijanona ela teo ilay fiara mpitatitra no tazanay lavitra, ary tsy niala raha tsy efa tonga teo akaiky teo izahay. Fa ny tena tiana hahatongavana dia ity; ny iray tamin’ireto mpanàkana no nàka ny taratasin’ny fiara, fa ny iray kosa nandeha niala lavidavitra somary niakatra ny làlana mankany amin’ny tetezana (làlana hizoran’ilay fiara rehefa avy eo). Hay ka efa nitsena azy tany aloha tany ny mpandray saran-dàlan’ilay zotra 144 voasakana teo. Nandeha ny ady varotra, ary tsy tazan’izy ireo sy tsy nalehan’ny sainy mihitsy izahay mianaka manaraka mora sy mihaino ny resaka nifanaovan’izy ireo avy ato aoriana (indrisy fa tsy nànana fitaovana nandraisana ny feo izahay, fa raha tsy izany dia tena vaovao ‘nilay be’ izy ity). Ny anton’ny ady varotra dia tsy inona fa ny mba hamerenana ny taratasy sy izay ho takalon’izany. Sarotra ho an’ireto mpitatitra rahateo ny toe-javatra nitranga satria ao anatin’ny faran’ny herinandro no voakapa ranjo. Ka raha tokony handoa vola any amin’ny birao ihany ve, tsy aleo mifampiraharaha amin’ingahy ‘sefo’ ety ambony ‘trottoir’, amin’izay ny taratasy azo, ny fotoana tsy very, ny tena tsy mahazo ‘lagy’? Fa ahoana ihany e? Fa tena mbola tsy ampy ve ny nanondrotana sy nanomezana tombon-dahiny an’itony sokajin’asa itony efa hatry ny fitondrana Ravalomanana sy hatramin’izao Tetezamita izao e? Mahalasa saina ihany mantsy fa toa lasa toy ny ‘sotro ranon-tsira’ angamba ny fahazoana vola be ho tambin’asan-dry zalahy ireny ka tsy mety fa toa vao maika mampitady zavatra hosotroina foana.
Rehefa mba anontaniana ny anton’ity tsy fetezana hanaraka lalàna sy fandaminana ity ry zalahy, dia valinteny azo foana ny hoe
‘ka mbola tsy mivaha ny krizy tsinona k’ah!
Ka alefa ihany ny fanontaniana hoe ‘FA AHOANA IHANY E?‘
Filed under: anao ny fitenenana, fiaraha-monina, politika, tapatapany, tontolon'ny asa | Tagged: Analakely, andravoahangy, Behoririka, CUA, GAULOISE, IRRESISTIBLE, kaominina, NAZA, Rakotondravahy Edgar, Ravalomanana, Soarano |	Leave a comment »
Behoririka: C.U.A vs mpivarotra amoron-dalana
Posted on 21/01/2010 by gazetyavylavitra
Mifanandrina eo amin’ny araben’i Behoririka, iny midina avy any Soarano iny ny mpiasan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra sy ny mpivarotra amoron-dalana nanomboka tamin’ny 1 ora sy 30 mn teo ka hatramin’ny fotoana anoratana ny lahatsoratra.
Ny CUA manao ny fandaminana satria na dia nesorina sy nomena toerana aza ireo mpivarotra teo aloha, dia misy andiany vaovao indray mipetraka tamin’ny toerana nanalàna azy ireny ka namorona fitohanana vaovao, na ho an’ny mpandeha an-tongotra, na ho an’ny fiara.
Ampangain’ireto mpivarotra ho naka ny poketrany misy vola moa ireto mpiasan’ny CUA ireto, ary izany no mahatonga ny savorovoro. Bahanan’izy ireo ny ampahan-dalana amin’ny ilany havanana raha midina avy any ambony ianao, mandra-pahatonga eo amin’ny tobin-tsolika maty ety amin’ny filoahana hiakatra ho any amin’ny tetezana.
Filed under: fiaraha-monina, politika, tapatapany, tontolon'ny asa | Tagged: CUA, kaominina, mpivarotra amoron-dàlana |	Leave a comment »
BEHORIRIKA / mpivarotra amoron-dàlana…
Posted on 07/01/2010 by gazetyavylavitra
Hagagàna ny an’ny mpampiasa iny làlana avy any Andravoahangy ho any Analakely sy Behoririka iny androany fa nitohana be ny fifamoivoizana. Be ny fiara no nitady làlam-baovao niakatra tany Ambondrona. Niova làlana daholo araka izany ireo Taxibe rehetra mpandeha amin’iny zotra iny.
Nitohana vokatr’izany koa ny fifamoivoizana, nanomboka teo amin’ny fivarotan-tsolika Galana eo Behoririka, Antaninandro, Ambondrona, Ambohijatovo, Analakely. Raha nalàlaka kosa ny teny afovoan’Analakely mankany Soarano.
Tsy naharitra ny Gazety_adaladala fa nidina teny an-toerana hanangona ny vaovao ho anao mpamaky.
Nolazain’ireo mpivarotra manao hetsika eo an-toerana fa fikambanana maromaro ry zareo no mitambatra amin’io androany io: ny an’ireo teo amin’ny Building, ny an’ny Globe, ny an’ny Behoririka.
Raha ilay ranamana noraisim-peo dia manaiky raha toa ka havoaka ho an’ny Analakely ny ao amin’ny Pochard, ary izy ireo kosa ampidirina ao amin’ny tsena Pochard mba hahafahany miditra ho ao anatin’ny sehatry ny ara-dalàna, sy handoavany hetra ho an’ny kaominina.
Nisy solontena avy amin’ny C.U.A sy avy amin’ny mpivarotra manamarina ny maha-mpivarotra na tsia ireo olona efa samy nitsitokotoko naka toerana teny anatin’ireo fariparitra natao ho anjara toeran’ny tsirairay.
Ny fiaraben’ny CUA etsy an-tsisiny tsy mitsahatra ny mamerimberina fa ny solontenan’ny mpivarotra no nametraka sy nanamarina ny momba ireo olona rehetra efa mipetraka anaty fariparitra ireo. Averiny any amin’ny samy mpivarotra araka izany ny andraikitra raha sanatria ka misy ny fifanolanana aoriana ao.
Mitaraina mantsy ireo mpivarotra amoro-dàlana efa ‘matihanina’ fa misy ireo izay vao tonga fotsiny nandritry ny tsenan’ny faran’ny taona no midongy hahazo toerana. Nanjary nisy ampahany tamin’izy ireo, hono, tsy nahazo toerana, ka nanangam-peo fa avelany hipetraka aloha ny entan’iretsy ‘vao tonga tafara’, ka rehefa tsy mahazo toerana ry zareo, dia raikitra ny fanipàzana ny entana any anaty ranomaimbo. Dia ho toy izany foana ve?
Raha mbola eritreritra ny an’ireo ao amin’ny tsena Pochard hoe hanao ‘sit-in’ eny anoloan’ny biraon’ny CUA amin’ny Alatsiiany, dia tonga dia vavany kosa ny an’ireo tetsy Behoririka androany.
Miandry ny fiovàna fitaovana isika dia omena anareo eto ny video.
Filed under: fiaraha-monina, politika, tapatapany, tontolo iainana, tontolon'ny asa | Tagged: Ambohijatovo, Ambondrona, Analakely, Antaninandro, Behoririka, CUA, Kamba, kaominina, Pochard, rarihasina, Soarano |	Leave a comment »